Hidhattoonni garee Bokoo Haraam kaaba-baha Naayjeeriyaatti 150 ajjeesan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Hidhattoonni garee Bokoo Haraam kaaba-baha Naayjeeriyaatti 150 ajjeesan
Hidhattoonni garee Bokoo Haraam kaaba-baha Naayjeeriyaatti 150 ajjeesan
Hidhattoota garee Bokoo Haraam ta’uu hinoolle kanniin jedhaman kaaba-baha Naayjeeriyaatti namoota 150 oli ajjeesuun isaanii gabaafame. Ajjechaan jiraattota irratti raawwate kuni gochoota heduu suukkanneessaa jedhaman keessa isa tokko ta’uunis himameera.
Baay’een namootaa kan ajjeefaman masjiida keessatti bakka isaan salaata magriibaa salaataa turanitti, akka worri ijaan argan ragaa bayanitti. Tokko isaa, xiqqaa guddaan, osoo gargar hinbaasin kan ajeesaa turan. Kanniin harka hidhattootaatti kufan ijoolleefi dubartootas dabalata. Daa’imni ganna afuriis kanniin lubbuu dhaban keessaa isa tokko. ‘Kan hedduu nama gaddisiisu,’ jedha koloon, ‘erga ajjeesanii booodas reffattis ibidda qabsiisuu isaaniiti.’
Ajeechaan kuni kan raawwate roobii galgala. Hidhattoonni Bokoo Haraam heddutti laakkawaman baadiyaa sadi naannoo Bornootti argaman keessa burraaquudhaan manniinitti ibidda kan qabsiisan.
Baadiyaa Kukawaa jedhamu qofa keessatti namoota 97tu hidhatootaaan ajjeefame. Jiraataan baadiyaa sanii kan du’a miliqe tokko reeffa namoota dhumanii hunda laakkayuu isaa AFPtti himeera. Kanniin maatii guutuu dhabanis jiraachuu isaanii dubbateera.
Baadiyoota lama biroo naannoo magaalaa Mongunootti argamanittis hidhattoonni namoota 48 ajjeesanii 11 madeessuun isaanii himameera. Kanniin lubbuun bayan osoo rasaasni itti roobu miliquu danda’uu isaaniis dubbataniiru.
garee boko haraam
haleellaa bokoo haraam
Previous articleReuters: Ethiopia scrambles to meet property demand in booming capital
Next articleYunivarsiitiin Kalifoorniyaa onnee namtolcheetti fayyadamuun umrii dhukkubsattuu dheeresse jedha